Ukuthanda igumbi elilala abantu ababini (kufutshane neBasel & Vitra) - I-Airbnb
Ukuthanda igumbi elilala abantu ababini (kufutshane neBasel & Vitra)
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguMirjam
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uMirjam iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Wamkelekile • Wamkelekile:-} Into Onokuyonwabela eBasel, eFransi kunye nomda onxantathu kwigumbi labucala elincinci. Unayo neWiFi, indawo yokupaka yabucala, ikhitshi lethu kunye nomatshini wokuhlamba impahla olahlwayo. Siyintsapho evulekileyo, ehamba nabantwana ababini. • Yonwabela i-Basel, eFransi kunye nomda onxantathu kwigumbi labucala elincinci. IWLAN, indawo yokupaka, ikhitshi kunye nomatshini wokuhlamba impahla ziphantsi kwakho. Siyintsapho evulekileyo, ethanda ukuhamba enabantwana ababini.
Igumbi lakho lokulala lilula kodwa lihle ibe litofotofo. Ebudeni bemini, abantwana bethu basenokuba mnandi - kodwa ebudeni beveki besesikolweni, ukuba ukhetha ukuzola;) Nceda uqaphele ukuba ungabelana ngegumbi lokuhlambela kunye nezinye iindwendwe. • Igumbi labucala lilula kodwa lixhotyiswe kakuhle. Ebudeni bemini abantwana bethu banokuzonwabisa - kodwa ebudeni beveki besesikolweni, ukuba ukhetha ukuthi cwaka ;) Nceda uqaphele ukuba kusenokufuneka wabelane ngegumbi lokuhlambela kunye nezinye iindwendwe.
4.80 · Izimvo eziyi-164
Sihlala kwilali endala, ejikelezwe yizidiliya, engekude neBasel kunye neVitra Museum. IFreiburg im Breisgau kunye neHlathi eliMnyama nazo zifikeleleka lula ngemoto okanye ngezithuthi zikawonke-wonke. Kwindawo yethu kukho iindawo zokutyela ezinkulu ezinokupheka ekhaya kunye newayini yeBaden. I-Rhine kunye nommandla wolondolozo lwendalo nazo azikho kude kakhulu • Sihlala kwilali endala, engqongwe zizidiliya, kude kufuphi ne-Basel kunye neVitra Museum. IFreiburg im Breisgau kunye neHlathi eliMnyama nazo zifikeleleka lula ngemoto okanye ngezithuthi zikawonke-wonke. Kufuphi uya kufumana iindawo zokutyela ezithandekayo ezinokutya kwasekhaya kunye newayini "yeBadischer". I-Rhein (umlambo) kunye nommandla wolondolozo lwendalo azikho kude.
Sisebenza sobabini, kodwa i-au pair yethu isekhaya ngexesha lokungena ukuze sinamkele. Ungaqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Sazise into oyidingayo ukuze sihlale sikhululekile kangangoko sinakho • Sobabini sisebenza isigxina, kodwa ngamaxesha okungena i-au pair yethu isekhaya ukuze inamkele. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ungasifumana nanini na. Sazise into oyifunayo ukuze senze ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko.
Sisebenza sobabini, kodwa i-au pair yethu isekhaya ngexesha lokungena ukuze sinamkele. Ungaqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Sazise into oyid…